shongrish - Nyambo dzino kodza mwoyo
Nyambo dzine tag 'shongrish'
shongrish Mapurisa (ZRP) dofo mapurisa zrp
shongrish shona chitoro
shongrish chinoz chikoro shona
shongrish wasu shona mutare
shongrish dofo chikoro chirungu baba
Wasu vachi verenga nhau dzeChiShona
WASU varambidzwa kuverenga nhau dzeShona paZBC mushure mezvizvi:
Hedzinoi ndaa dzichierengwa ndiMutape wekwaonini, wekwaZimunya; Harare: Mukuru anolidhe bato ririkuite looting namasi aite kuti anhu anerwe nge police apenoo tazwa kuti mapurisa apedze mvura yose nge ma teargas ose achiti hambai. Apa izwa Zita rebato hazi NERA. Anhu angoite mavhu nerubbish kuwanda kuzoringise looting yacho. Amwe arume waingoite drive left hand motikari apinde patight ngemapurisa paroadblock apo mupurisa paamise motikari avhunze munhu on the right side kuti aproduse driver's licence. Mupurisa adye rasha paaite see kuti driver haasiye ari kuleft, akavati vaifunge kuti akapusa so ngavaite return steering kuright side. Amwe asikana azoitwe arrested kuNSS aite sing Bvuma Wachembera mustadium muchiitwe inaguration yemukuru wenyika. Mapurisa ati kufarisa kwakadai has never happened before.....
shongrish Mapurisa (ZRP) wasu harare harare protests 2016 anti mugabe riots 2016 NERA
shongrish chirungu mukomana musikana rudo vaseline
shongrish chirungu mimba nhumbu
shongrish shona svomhu Lazarus Dokora